ကိုဗစ်ကြောင့်စာမေးပွဲရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့အပေါ် တက္ကသိုလ်အချို့လက်ခံ
18 มี.ค. 2563 - 14:21 น.
ကိုဗစ်-၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါပျံ့ပွားမှုကိုစိုးရိမ်ပြီး စာမေးပွဲရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သဘောထားအတိုင်း မဖြေဆိုလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကို ဇွန်လအစောပိုင်းမှာ အစားထိုးစာမေးပွဲပြန်လည်ကျင်းပပေးမယ်လို့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အပါအဝင် တက္ကသိုလ်အချို့က မတ် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
' ' ကျွန်တော်တို့က တက္ကသိုလ်ဆီးနိတ်တွေကိုပဲ ဆုံးဖြတ်ဖို့ပြောထားတယ်။ သူတို့ အဆင်ပြေတဲ့ကာလမှာ ပြန်စစ်ပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းတွေကတော့ ရွှေ့ပေးမှာပေါ့။ တခြားတက္ကသိုလ်တွေက အခုမှ ဆီးနိတ်အစည်း အဝေးထိုင်တုံး မသိရသေးဘူး'' လို့ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက မတ် ၁၈ ရက် မနက်၁၁ နာရီဝန်းကျင်မှာ ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ မတ် ၁၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ ပုံမှန်စာမေးပွဲ ကို ဖြေဆိုလိုတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်စာမေးပွဲကာလကို ဖြေဆိုသူတွေအနေနဲ့ ဘာသာရပ်အားလုံးကို မပျက်မကွက်ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်ပါက အစားထိုးဖြေဆိုခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ မတ် ၁၈ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။
'' WHO က ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ လက်သန့်ဆေးရည်တို့ဘာတို့ သုံးဖို့သတ်မှတ် ထားတာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိတော့ ၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မလုံ လောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတယ်။ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတော့ ဇွန်လကျမှ စာမေးပွဲဖြေမယ်'' လို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုညီဇော်ကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
စာမေးပွဲရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာပါပေမယ့် ဒီကနေ့ မတ် ၁၈ ရက်မှာကျင်းပတဲ့ စာမေးပွဲကိုတော့ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် အားလုံးဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ ရတနာပုံတက္ကသိုလ် သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဘချစ်က မတ် ၁၈ ရက်မှာ ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကတော့ စာမေးပွဲမဖြေဆိုလိုတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို အစားထိုးပြန်လည် ကျင်းပပေးမယ်လို့ မတ် ၁၈ ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဆီးနိတ်အစည်းအဝေးအရ မတ် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဖြေဆိုပြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ အနေနဲ့ မဖြေဆိုလိုပါက နောက်ဘာသာတွေဆက်မဖြေဘဲ အစားထိုးဖြေဆိုဖို့ စာရင်းပေးသွင်းပြီး ဖြေဆို နိုင်သလို ဆက်လက်ဖြေဆိုလိုသူတွေအနေနဲ့လည်း ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါ တယ်။
' ' ကျွန်တော်ဆီကို လှမ်းပြောတဲ့ထဲမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်ပညာရေး၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ပခုက္ကူတွေပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပျက်ကွက်စာရင်းတောင်းတော့ နဲနဲ ပဲရှိတယ်။ ၁၀၀ ဖြေလို့ရှိရင် ၁၀ ရာနှုန်း ၁၅ ရာနှုန်းလောက်ပဲပျက်ကွက်ရှိတယ်။ ဖြေလိုတဲ့သူကများတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေက သူတို့ အချိန်ဇယားအရ အဆင်ပြေတဲ့အချိန် လွတ်တဲ့အချိန်တွေမှာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြန်ကျင်းပပေးလိမ့်မယ်။''လို့ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ သိန်းဝင်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်ကြောင့်စာမေးပွဲရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့အပေါ် တက္ကသိုလ်အချို့လက်ခံ